काठमाडौंमै घर भएका ३० जना सांसदहरु घर नभएको भन्दै घरभाडा लिँदै ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
December 16, 2018 Nepal E News
काठमाडौंमै घर भएका ३० जना सांसदहरु घर नभएको भन्दै घरभाडा लिँदै ! खोज पत्रकारिता केन्द्रले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, जसले बताउँछ कि यो मुलुकलाई लुट्न लागि परेका मानिस अरु कोही होइनन्, सर्वहारा भनिएका राजनीतिज्ञहरु हुन् । लाज त कसैलाई पनि लाग्नेवाला छैन, तै पनि धित मर्ने गरी भन्न पनि त छोड्नु भएन नी ।
काठमाडौंमा घर नभएका सांसदहरुलाई राज्यको ढुकुटीबाट घर भाडा बापत निश्चित रकम दिइन्छ । तर यो सुविधाको फाइदा उठाउँदै घर मात्र होइन काठमाडौंमा महल ठड्याएका मख्खी चुस लोभिहरुले संसद सचिवालयबाट महिनै पिच्छे घर भाडा लिइरहेका छन् । खोज पत्रकारिता केन्द्रका अनुसार राजधानीमा घर भएका ३० जना सांसदहरु घर नभएको भन्दै घरभाडा सुविधा महिनै पिच्छे लिइरहेका रहेछन् ।
सबका आआफ्नै बाहाना छन् । कोही सासुको घरमा बसेका छन् र भन्दैछन् सासुलाई भाडा बुझाउँछु । घर ज्वाईहरुले भाडा बुझाएको मैले त सुनेको छैन बरु उल्टो अपुताली पाएको मात्र होइन, अपुतालीको लोभले बसेकाहरुको धेरै कथा सुनेको छु । जनतालाई भोट माग्दादेखि बेकुफ बनाएको बानी जीवनभर नजाने रैछ ।
मासिक १८ हजारमा ¥याल सिगान चुहाउने लोभी, झुठा र भ्रष्ट नेताबाट के सिक्ने र के आशा गर्ने । कानुनमा चाँही स्पष्ट व्यवस्था छ कि झुठा विवरण दिएर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काम भ्रष्टाचार हो । लाभ वा सुविधा पाउने उदेश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम थर ठेगाना, नागरिकता वा अन्य कुनै कुराको झुटो विवरण पेश गरेमा नीजलाई कसुरको मात्रा हेरी ६ महिना देखि १ बर्षसम्म कैद र दश हजार देखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ ।
यि ३० जना मध्ये कसैलाई कारवाही हुन्छ होला त ? केही हुन्न । कारवाही होइन वाहवाही नै हुन्छ सबको । ३० जना मध्ये २८ जनाको कुरा छोडौँ २ जनाको कुरामा जोड दिउँ । मैले छानेका २ जना हुन वूर्व सभामुख ज्युहरु ।
१. पूर्व सभामुख नेकपा संसदिय दलका उपनेता, कानुका ज्ञाता माननिय सुवास नेम्वाङ ।
२. पूर्व सभामुख हालका उर्जा मन्त्रीकी श्रीमती ओनसरी घर्ती मगर ।
विधान सभाका अध्यक्ष तथा रुपान्तरित संसदका सभामुख सुवास नेम्वाङको घर हाम्रो स्टुडियो भन्दा अलि पर बालुवाटारमा छ । पूर्व सभामुख ज्युले सबैलाई नियम सिकाउनु भो र सिकाउँदै हुनुहुन्छ । तर आँफूले चाँही काठमाडौंमा घर छ भनेर सोधिने प्रश्नको उत्तरमा बैंकबाट ऋण लिएर किनेको भन्ने जवाफ दिनुभएछ ।
बुझ्नेले घर छैन भन्ने बुझेर महिनै पिच्छे बैैंकमा पैसा हालिदियो विचारा ! इलामदेखि काठमाडौंको भिआइपी एरियामा घर भएका नेता ज्युहको के दोष । पूर्व सभामुख जस्तो मान्छेले गल्ती स्वीकार गरेर, सजायको भागिदार भएर, सरकारी कोषबाट लिएको पैसा फिर्ता गर्नु हुन्छ भन्नेमा विश्वास छ कसैलाई ?
सुविधा उपभोग गरिरहनु भएका माननिय ज्युलाई के भएको छ भन्ने थाहा छैन रे, बुझ्नु हून्छ रे । माननिय सदस्यलाई कुरा बुझेर, जनताको पसिनाको ट्याक्सबाट लाज सरम नमानी झुठो विवरण पेश गरेर लिएको पैसा फिर्ता गर्न २४ घण्टाको समय तोकेको छु, भनेर माननिय कै शैलीमा भन्न सक्ने बहादुर कोही छ र यो देशमा ?
अब कुरा गरौं सांसद ओनसरी घर्ती मगरको । पूर्व सभामुख समेत हुनुभएकी ओनसरी घर्तीमगर जलस्रोत मन्त्री बर्षमान पुन की श्रीमती हुनहुन्छ । उहाँ श्रीमानसँगै सरकारी निवासमा बस्नु हुन्छ । तर राज्यको पैसा दोहन गर्न पाएपछि किन छोड्ने ? सुविधा पाइन्छ भने दुविधा किन ?
मजाले लिने विचार गर्नु भो उहाँले । कठै दुर्गम गाँउका भोट हाल्ने जनताले के भन्लान । हेर्नुस त केही बर्ष अघिको तस्वीर सायद सही होला अग्रगामी छलाङ । हुन त के भन्नु नी, केही थाहा पाए, केही भन्ने न हुन ?
गरिब जनतालाई आज खाए भोली के खाने भन्ने नै बुझ्न फुर्सद छैन । सर्वहारा नेताको सम्पत्ती खोज्ने फुर्सद कहाँ छ र ? अर्का सांसद सत्या पहाडी पनि मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेती श्रीमती हुनुहुन्छ र उहाँ पनि श्रीमानसँगै सरकारी आवासमा बसेर मासिक घरभाडा लाज अलि कति पनि नमानी लिइरहनु भएको छ ।
गरिब जनताको करबाट उठेको पैसा यसरी लुटेर लिदाँ कसैलाई केही कारवाही हुँदैन । हो देशमा त ठुलै परिवर्तन पो आइसकेछ । झ्वाट्ट एउटा क्रान्तिकारी गीत सम्झिए । गाँउ गाँउबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ ।
भो अब उठ्न परेन, न गाँउबाट, न बस्तीबाट कैतबाट पनि उठ्नै परेन । देशको मुहार त फेरियो । मजाले फेरियो । सर्लक्कै फेरियो । गाडी छ, कम्पनीहरुमा शेयर छ, जग्गा जमिन छ । घर छ, सरी महल छ । अनि घर भाडा पनि छ । यो भन्दा बढी कति फेरियोस यो देशको मुहार ?
अर्थतन्त्रकाठमाडौंमै घर भएका ३० जना सांसदहरु घर नभएको भन्दै घरभाडा लिँदै !
बागलुङका तीन सडकलाई चार करोड बजेट बिनियोजन